ငွေလဲနှုန်း MMK သို့ ZAR, မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ နှင့် တောင်အာဖရိက Rand, ပွောငျး
ငွေလဲနှုန်း MMK — ZAR ပွောငျး မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ နှင့် တောင်အာဖရိက Rand, ဂဏန်းတွက်စက်, ဘယ်လောက်အလိုတော်
0,01 ZAR တောင်အာဖရိက Rand
ဒီငွေလဲနှုန်း MMK/ZAR ရက်စွဲအပေါ်သက်ဆိုင်ရာ 25.10.2020 01:54
သင့်အနေဖြင့်ငွေကြေးကူးပြောင်းခြင်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်များမှာ မြန်မာ့လေကြောင်းကျပ်ငွေ (MMK) и တောင်အာဖရိက Rand (ZAR). အဆိုပါလဲလှယ်မှုနှုန်းကို up-to-date ဖြစ်အောင်ဖြစ်ပါသည် 25.10.2020 01:54.
တောင်အာဖရိက Rand (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ code ကို ZAR) — : ဒေသခံငွေကြေးကဲ့သို့သောနိုင်ငံများအတွက်ဖြစ်ပါသည် တောင်အာဖရိက, ဇင်ဘာဘွေ.
တောင်အာဖရိက Rand (ZAR)
503972,48
1007944,96
200 15 889,93
500 39 724,82
1000 79 449,64
2000 158 899,28
5000 397 248,19
10000 794 496,39
20000 1 588 992,77
500003972 481,93
ငွေကြေးက ISO code ကို ZAR
ဒင်္ဂါးပြား 5c, 10c, 20c, 50c, R1, R2, R5
ပိုက်ဆံငွေစက္ကူတွေ R10, R20, R50, R100, R200
နိဒါန်း၏တစ်နှစ်တာ 1961 ခုနှစ်
ပြဿနာများ၏ဘဏ် တောင်အာဖရိက Reserve Bank သည်
ပူစီနံ တောင်အာဖရိက Mint,
ACS အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး. Page load 0.0359 s.